Wiil 18 sano jir ah oo toogasho ku laayey 21 Caruur ah, isagiina la dilay (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Wiil 18 sano jir ah oo toogasho ku laayey 21 Caruur ah, isagiina la dilay (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dad u badan caruur ayaa lagu laayey dhacdo toogasho ah oo ka dhacday dalka Mareykanka, iyadoo arrinta Koontartoolka Hubka ay dood weyn oo hor leh ka dhalisay dalkaasi.
Falkan ugu danbeeyay ayaa lagu dilay 19 arday oo da’doodu u dhaxayso 7 ilaa 11 sano, waxaa sidoo kale la dilay laba ka mid ah macalimiintoodii. Toogashada waxaa geysty Wiil 18 sano jir ah oo hubaysan, waana falkii ugu geerida badnaa muddo​​10 sano dalka Mareykanka.
Wiilkan ayaa lagu magacaabaa Salvador Ramos – wuxuuna ahaa shaqaale ka shaqeeya Baararka cuntada degdega. Wuxuu ahaa wiil keli ku koray, wuxuxuuna markii hore toogtay ayeeyadiisa, isagoo kadib xasuuq ka geystay dugsiga hoose ee Robb ee magaalada Uvalde, Gobolka Texas.
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkan dhiigga badan ku daatay, wuxuuna ku booriyay dadka Mareykanka inay u istaagaan u ololeynta wax ka qabashada hubka Mareykanka ee siyaasadeysan, isagoo caddeeyay in dunida oo dhan aanu ka jirin hubka laga ganacsado Mareykanka ee qasaaraha badan geysta.
Previous articleC/raxman C/shakur oo ka gaabsaday Dood ka taagan Kursigiisa xildhibaan iyo Su’aalo ka dhashay..
Next articleMaxkamada Ciidamada oo Amar soo qabasho ah u jartay Saraakiisha Sare e Ahlu suna